Ogaden News Agency (ONA) – Safar dheer iyo Xeedhada salkeeda. Sawirka Jig-jiga iyo Nolasha taala .. Qore / Daahsoone (Undercover)
Safar dheer iyo Xeedhada salkeeda. Sawirka Jig-jiga iyo Nolasha taala .. Qore / Daahsoone (Undercover)
Waxaan malaagada Jigjiga ka tagay 6-7 sano kahor. Waxaan ka mid noqday Qurbajoogta aaday wadanka dibadiisa waana ku soo laabtay.
Mudadii aan magaalada Jigjiga joogay waxaa ka jiray oon ugu tagay 4 xaaladood oon horey uga jirin: Cabsi guud oo dadku ka simanyahay, Xiisad ciidan mid dibada iyo mid gudahaba, Qayilaad yar iyo wayn maskaxda kaga jirta in uu marqaamo, Kala hoosguur iyo minjo xaabin.
Hadaba xiliyadan danbe waxaa socday in dadka qurbo joogta ah logu baaqayay in ay kusoo laabtaan wadankoodii ayadoo latusayo muuqaalo iyo sawiro sheegaya in uu wadanku leeyahay bilic kusoo korodhay xiliyada danbe sida laami, jaamacad. isbitaal, hotelo iyo dhismayaal kale oo soo jiidasha leh.
Anigoo qurbaha joogtaa ka mid ah ayaan aad u daawaday waxa kasocda TV yada booqda wadanka iyo filimada Youtube,ka ah eek u jira web-abka qaar. Ka dib, waxaan inbadan iswaydiiya 2 Su-aalood;
1- Maxaa kajira magaalada Jig-jiga oo aad taqaanay oo isbadal ah.
2- Gobaladii kale aawaye? Maxaa Jig-jiga oo kali ah loogu gor-gortamayaa.
Waxaan isku dayay in aan waco dad aan qaraabo nahay si ay iiga qanciyaan su-aalaha, waxayse kusoo gaabsadeen hadaad timaado waad fahmi laakiin anaga wax noosoo kordhay ma jiraan taas oo macnaheedu yahay, hadaan nahay dadka wadanka jooga lamid manihin Qurbo joogta.
Waxaan go’aansaday in aan soo arko dalkii. Waxaan raadiyay sidii aan wadankii kutagi lahaa una ogaan lahaa xaqiiqada jirta aniguna wax ku heli lahaa kuna nabad gali lahaa. Waxay ka maarmi wayday marka in aan sheegto in aan kamid ahaa ururka ONLF hadana aan katanaasulay mabda’iisii. Waxayna ahayd talo aan ka helay dad ku dhexjira maamulka Jig-jiga oo aan kusoo dagi lahaa. Waxaynu ii raaciyeen inay iyagana ka faa’idasanayaan imaatinkiisa oy u sawitrayaan inay sabab u ahaayeen soo xarayteyda.
Wadankii waan tagay waxana istaagay magaalada Jig-jiga (Taariikhda aan ka dagay sheegi mayo si aanay raadraac u noqon). Waxaana u dhexqaaday dhanwalba. Waxaan booqday xarumo badan oo kala duwan waxaan la kulmay dad badan oo wadanka jooga. Waxaan u kuur galay ilaha ganacsiga. Waxaan dhexgalay siyaasiinta killilka heerar kala duwan. Waxaan isha saaray ciidanka liyuu-police ka iyo qaabka uu u shaqeeyo.
Waxaan qoomamooday horta oo ay talo iga hoos baxday markii aan sheegtay in aan ururka ONLF kamid ahaa, sababtoo ah sahankaygiina wuu kala dhantaalmay sababtoo ah waxaa la ii yeelay shaqo mashquul iigu filan.
Hadaba maxaa kajira Jig-jiga oo dhab ah?
Magaalada Jig-jiga waa xarunta gobolka waxaanad ka ogaani marka ugu horeysaba inuu ka jiro wadanka dagaal aan qarsoodi lahayn oo cid walba ay qirayso indhahaagana aad ku arkayso. Wuxuuna ka dhacaa dagaalka dhamaanba wadanka intiisa badan si maalinle ah. Dagaalku waa sheekada ugu wayn ee wadanka kajirta ee intii istaqaana ay hadal haynteeda ku qayilaan, waxaana keenaya 2 arimood;
1- Dadka dawlada lagu magacaabay ee meesha jooga waa shaqaale u shaqeeya ciidanka wadanka jooga marka waxay gudanayaan shaqadooda la-dagaalanka jabhada. Taas waxaad dareemaysaa marka aad la kulanto ruux mushahaar qaata oo walwalka ugu badanee uu qabaa ay tahay ONLF iyo shaqadiisii waxa uu ka hayo.
2- Waxaa badan dagaalada wadanka kadhaca waxaana ku dhinta dad layaqaano sida hogaamiyaasha liyuu police. Arintaa waxay keentaa hadal hayn badan oo dhanka dagaalada socda ah.
Dagaalku waa xiisa taagan oo colaadeed, saamayna kuleh wax kasta oo wadanka kafulaya.
Hadaba magaalada Jig-jiga waa meesha kali ah ee awooda lasaaray in laga sameeyo isbadal dhanka dhismaha iyo ganacsigaba ah. Waxa lagaliyay dakhli badan oo laga soo diyaariyay dawlada dhexe iyo qurbaha. Markaan dad badan oo odayaal ah la sheekeystay waxay ii sheegeen in maal galainta magaalada Jigjiga ee ka socoda dhanka dawlada Itobiya uu yahay mid loogu tala galay in lagu lumiyo taageerada ururka ONLF uu ku haysto Qurbaha, waxayna ka dhalatay bay yidhaahdeen markii ladiyariyay safaro badan oo dibada ay madaxda killilku iyo niman khubara ah oo la socda ku tageen si dadka qurba-joogta ah ay kusoo abaabulaan halkaasoo ay kala kulmeen guuldaro xoogan. Ka dib, waxaa laqatay in la hir galiyo 2 qodob oo lagala soo dhex baxay doodihii ay la galeen qurbajoogta;
1- In qurba joogta dhul laga siiyo Jig-jiga oo aanay gudaha u sii gudbin si bilicda magaalda Jigjiga ay u dhisaan taasoo aysan laqabin gobolada kale.
2- In loogu dhawaaqo cidkasta oo dhul doon ah in ay dhahaan nabada qaadanay. Sida kale in qurbajoogta qaarkood eheladooda laxidho si ay ugu hogaansamaan barnaamijka Itobiya ay wadato.
Waxaan la go’aansaday in lagu fuliyo barnaamijkaas hab dacaayad ah (borobagandha) ah ayadoo loo adeegsanayo idaacadaha, TV-yada iyo website-yada.
Waxaan maray wadooyinkii aan mari jiray iyo meelihii aan fadhiisan jiray waxaana tagay goobo iga danbeeyay aniga oo ladhisay xiliyo dhaw. Dadku (shacabka, maamulka iyo ciidanka) waxay kamidaysan yihiin waa cabsi, taasna waa tii aan kaga tagay wadanka 7ba sano kahor.
Magaalda jigjiga waxaa ku xidhan muwaadin u dhalatay wadanka oo farabadan waxaana arkay qaar lasoo daayay dhawaan. Waxaana kula kulmay magalada maalinta jumca ah oo ay fasax yihiin. Waxaana loo tababaraa dadkaa la soo daayay oo laga dhigayaa liyuu police. Waxay qaar ii sheegeen in ay wali xidhanyihiin, sababtoo ah waxaa nala yidhi hadaad doonaysaan in la’idi sii daayo waa in aad noqotaan ciidan ladagaalama Jabhada.
Waxaa kalle oo ay dadku kasimanyihiin dareenka rajada xoriyada. Hadaad ruuxa si hoos ahaan ah ula sheekaysato wuxuu kuu sheegayaa in Ethiopia ay tahay Gumaysi aad u xun, in laag xoroobana ay waajib tahay. Lakiin waxaad arkaysaa dareenka dadka oo qaarna ku qanacsan yahay hadafka iyo nidaamka ONLF ay wado, qaarna ku leeyihiin waa sax in laraadiyo xoriyada lakiin maanta waxa jira urur xoogbadan oo ONLF layiraahdo hadii waxaas laga dayn lahaa ama saas layeeli lahaa waa la guulaysan lahaa. Isku soo duuduuboo dareenka rajada xoriyada waa laga siman yahay.
Kalsoonaanta maamulka jigjiga isu hayo
Marka aad rabto inaad ogaato xidhiidhka iyo wada shaqaynta maamulka Jigjiga ood la sheekeysato wuxuu kuu sheegi mid walba kan kale ceebtiisa isagoo ku xamanaya naxariis daro iyo jaajuusnimo iyagoo dhahaya wuxuu daacad u yahay xabashida. Arintaas marka lawada joogana waa amaan marka lakala jeedsadana waa cay laysku xanto.
Wuxuu ruux walba ku dadaalayaa sidii uu u soo dhacsan lahaa mushaharkiisa, asagoo naftiisana ka ilaalinaya in uu godob galo wuxuuna jecelyahay in uu xidhiidh hoose lasameeyo Jabhada suu u nabad galo ama dareenka naftiisa u qanciyo.
Hadaba waxaa dhacda in laysu khadhaadheeyo oo kuwa waawayn amar kusoo rogaan waxa ka hooseeya kuna dhahaan baxa oo qoryo qaata oo dagaal aada, taasoo kuwaad hoos ahaan ula sheekeysato ay kaaga sheekeen wixii ay kaga dabasheen.
Ciidanka liyuu police
Ciidanka liyuu police waxaan ku mataalay mooryaankii Soomaaliya joogi jirtay. Ruuxii aan arki jirin mooryaan way adagtahay in uu fahmo. Waa ciidan dhanka diinta, akhlaada, nolosha iyo caafimaadkaba aad uga liita.
Waxaan si hoos ahaaneed ula sheekaystay kuwo masuuliyiin ah iyo dablayaal ah waxayna ii sheegeen in ay dagaalada ku hoobteen, oo aanay diyaar u ahayn dagaal kafool kafool oo nadhexmara anaga iyo jabahadda, laakiin aan ishelno marmar badan wayna gacan kulushahay jabhaddu maalinkaad is heshaan ayay yidhaaheen.
Marka aad waydiiso maxay tahay rajadaada ugu wayn? Waxay iska racsanyihiin aakhiro waan kala fogaanay aduunkana ONLF waan la colownay. Hada waxaan uun isleenahay intay dhamaadaan baad mushahaarkiina fadhi ku cuni doontaan, lakiin geeri ayaa ka sokaysa himiladaas. Waa hadalka ay isku waafaqeen dhamaan ragii aan la sheekaystay.
shacabku waa Soomaali mana ay ogala marna in loogu yeedho Ethiopia, balse ma muujisan karaan arintaa. Waxaan magaalada Jigjig kula kulmay nin oday ah. Waxan u sheegay in aan kamid ahaan jiray ONLF hadana aan dawlada u imid balseed u ragtaa ayaan weydiiyay? Wuxuu igu yidhi hadaad tahay nin dawlada isu dhiibay maxaan ka sheekaysanaa awalba ONLF ayaad ahayd oo war badan ayaad ogtahay hadana waxaad joogtaa Jigjiga oo wax waad aragtaa adeer maxaan ku usheegaa?
Waxaan waydiiyay seed u ragtaa imaatinkayga magaalada Jigjig? Qosol yar intuu qoslay ayuu yidhi adeer wiil yar baad tahaye waad iska waayo arki doontaa. Isagoo hadalka siiwada ayuu yidhi; 1977 kii waxaan maqli jiray nin abeeso koriyaw adigaa u aayi! Waxaan kuu ogahay axmaaro nin la dagaalamaya iyo nin isu dhiibay in ay isku mid u yihiin. Kan isu dhiibayna way dili xili ay ahaataba. Intuu i soo dhawray ayuu yidhi; ma maqashay Soomaali soomaalinaw! haa ayaan idhi. Wuxuu yidhi ama Xamar joog ama Jigjiga. Soomaali ayad tahay axmaarana waligaa ku aamini mayso, waxaana daliil kuugu filan kuwiinii kaasoo horeeyay!
Waxaan goob qarsoon la fadhiistay dhalinyaro wax barata oo arday ah waxaana dhex dhigay su-aashan.
Waxaa wadanka kajira ciidan deegaanka leeyahay iyo Jabhad ONLF. Waxaa kaloo jooga ciidankii Ethiopia. Maxaa xal ah? Sideen ooga bixi karnaa colaada?
Laba wiil mooyee way hadleen intoodii kale waxayna yidhaahdeen; walaal tan waa lagumaystaa. Waxa qoriga isugu keen dhiibayna waa Ethiopia waxaana kaga bixi karnaa inagoo garab istaagna wiilasheena duurka jooga, oo axmaarada garabkeeda ka baxna wayna ka adkaadeen. Waxaa halmar i dhaqaaqay xaada markaan maqlay jawaabta dhalintaa da’da yar. Waxaana is badalay dareenkaygii waxaana ku sigtay in aan si cad u abaabulo oo waxaan is idhi tolow ma xubnaa kuwani. Waxaase hubaal ah in aysan xubno ahayne ay ka tarjumayeen un dareenka shacabka.
Ajanabiga jooga Jigjiga
Dadka jooga magaalada Jigjiga ee ajanabiga ah waa dad la ilaaliyo kuna badnayn socodka magaalada dhexdeeda aadna loo ilaaliyo oo ogsoon waxa wadanka kadhacaya. Waxaana laga dhaadhiciyay in ay indhaha ka laabtaan hadii meel ay joogaan wax ka dhacaan taasoo loogu sheegay in amaankooda lagu sugayo. Aadamuhu waa wax naf jecel. Waxaa la aaminsiiya in uu jiro dad doonaya in ay wax arbushaan ama iyagaba qafaalaan,. Waxaa ii suuro gali wayday in aan dadkas la kulmo sababo amni darteed.
Hadalkii oo kooban
Dadku yayna ku kadsomin waxa laga siidayanayo TV ga. Saxafadu waa mida kali ah ee dagaalku kasocdo hadda. Waxaa dib loo abaabulyaa xubnaha jabhada ee qurbaha. Waxa la hawl galinayaa dadkii jabhada kabaxay si uu saaxiibadiis u keeno.
Dadkaan u tagay see ahaa dareenkoodu markay i arkeen
Wajiga ruuxa aan ehel ahaan ugu tago ayaan ka garanayay in uu aad uga xunyahay in aan soo xaroodo. la iimase muujin karin.
Waa qormo socota.
Nolosha dhabta ah ee shacabka magaalada waa middan :
FG: Sawirada badankood waxaan u qarinay wajiyada ka muuqda in aan loo aanaynin. La socda qaybaha dambe. Filimaan la soo dirayna waqtiga ku haboo ayaan soo dayn doonaa ee la socda.